Umatshini wokuqhushumba Shot, umatshini wokuqhekeza, Umshini wokuqhaqha-Show
IYancheng Ding Tai Machchan Co, Ltd yinkampani ebandakanyeka kwizixhobo zokupeyinta isanti, idubula isixhobo sokucoca ukuqhuma kunye nokwenza uyilo lwezixhobo kunye nokwenza amashishini akhethekileyo. Inkampani ixhotyiswe ngokufanelekileyo, inamandla obuchwephesha, inamava eminyaka emininzi kuyilo nasekwenzeni. Ezi mveliso zithengisa kakuhle kumazwe angaphezu kwe-40 kunye needolophu, ezisetyenziswa kakhulu kumandla omoya, ukuhamba ngenqwelomoya, metallurgy, oomatshini, ukwakhiwa, ukwakha iinqanawa, ukufunyanwa kwezinto zakudala, imigodi kunye namanye amashishini.
Ungasinxibelelana nathi heer
Intshayelelo kunye nokusetyenziswa komatshini wokuqhumisa wokudubula ngokuqhushumisa Umatshini wokuqhushumisa luhlobo lwetekhnoloji yonyango yokugqabhuza isanti yentsimbi kunye nokudubula kwentsimbi ebusweni bezinto ezibonakalayo ngesantya esiphezulu ngomatshini wokudubula. Xa kuthelekiswa nobunye ubuchwephesha bokunyanga umphezulu, ngokukhawuleza ...
Malunga neNkampani yeDingtai: Oomatshini bethu bokudubula ngokudubula basusa ukungcola, indawo ecocekileyo kunye neendawo ezinomgangatho ophantsi, yongeza ukuthungwa konyusa ukunamathela kwepeyinti kunye nokonyusa ubomi bovavanyo lwezicelo zesinyithi. Nxibelelana nathi, sinako ukunceda: Ukucutha ixesha lokuPhakanyiswa kweMveliso Ixesha lokuPhakama kweMveliso ephezulu ...
ukudubula kuqhuma iindawo zokuSebenzisa, Dubula Umatshini Wokutshula, H umatshini wokudubula uqhushumbe, Umatshini wokuqhushumba Shot, Shot Blasting Turbine, I-Shot Blasting Wheel, Zonke iimveliso